Wednesday June, 20 2018 - 00:58:25
Tuesday January 02, 2018 - 16:22:26 in by salman abdi
Xiriirka qaaradda Africa ayaa qaban-qaabinaya xafladda sanadlaha ee lagu bixiyo abaalmarinada kala duwan, waana markii 26-aad oo ayConfederation of African Football (CAF) agaasimayaan xafladaan qiimaha weyn ugu fadhisa dadka kubadda cagta Africa.
Abaalmarinta ugu weyn ee la sugayo waa in lagu dhawaaqo xidiga ugu fiican qaaradda Africa ee ay u tartamayan Sadio Mane,Aubameyang iyo Mohamed Salah iyo sidoo kale macalinka ugu fiican qaaradda Africa – waxaana ugu cad-cad Hector Cuper oo maamula xulka Egypt.
Xafladaan waxey dhici doontaa 4-ta January – Khamiis, waxeyna ka dhici doontaa magaaladaAccra ee dalka Ghana.
YAA KASOO QEYB GALAYA:
Xafladaan waxaa kasoo qeyb galaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Africa Ahmad Ahmad, madaxweyne ku xigeenkaKwesi Nyantakyi, madaxa fulitna xubnaha CAFAmaju Pinnick, Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha GhanaIsaac Asiamah.
YAA DAADIHIN DOONA?
Xafladaan waxaa ku dhawaaqi doona guuleystayaasha halyeeygii hore GhanaSammy Kuffour.
MUSHARAXIINTA DHAN WALBA:
Xidiga Ugu Fiican Qaaradda Africa:
Xidigta Ugu Fiican Qaaradda Africa:
Da’yarka Ugu Fiican Africa:
Macalinka Sanadka Africa:
Kooxda Sanadka Africa:
Xulka Ugu Fiican Qaaradda Africa:
Xulka Ugu Fiican Qaaradda Africa (Dhanka Haweenka):